अपमानको ‘कालकूट विष’ पिएर सत्तामै उपेन्द्र | Ratopati
काठमाडौँ । ‘जबसम्म सरकारले पोल्टिकल एग्रीमेन्ट गर्दैन, भूमिकालाई स्पष्ट गर्दैन तबसम्म सरकारमा मन्त्री बन्नका लागि मात्र सरकारमा जान हामीले कुनै औचित्य देखेका छैनौँ । उहाँहरुको चुनावको घोषणपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारमा किन जाने ?’
यो २०७५ वैशाख १९–२१ गतेसम्म बसेको तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय हो । तर एक महिना नबित्दै सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भयो ।
पटक–पटक पत्रकारलाई दिएको प्रतिकृया र केन्द्रीय समिति बैठकबाट गरेको निर्णयअनुसार सम्झौता नगरी सरकारमा सहभागी भएको तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीले पटक–पटक सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएको थियो । सत्ता ‘मोह’भन्दा पनि आफ्ना (मधेश आन्दोलनका) माग पुरा गर्न आफूहरु सरकारमा गएको पार्टीका नेताहरुले तर्क दिने गरेका थिए ।
अन्ततः कुरा नमिलेपछि गच्छदारले पार्टी फुटाएर मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) गठन गरेर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । मधेशको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘यदि उपेन्द्र यादवले चाहेको भए, त्यतिबेला पार्टी नफुट्नसक्थ्यो । तर, यादवकै सत्तामोहका कारण पार्टी दुई टुक्रा भयो । आफू मात्रै सत्ता पुग्नुपर्ने भोकले पार्टी विभाजनको तहसम्म पुग्यो ।’
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले गत मंसिर १३ गते आफ्नो मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अबको आफ्नो लक्ष्य सविधान संशोधन नै रहेको बताएका थिए । पत्रकारले सरकार छाड्ने बारेमा राखेको जिज्ञासामा प्रष्ट रुपमा भनेका थिए, ‘संविधान संशोधनका लागि वार्ता प्रकृया अगाडि बढाउछौँ, यसमा सरकार तथा सत्ताधारी दल सकारात्मक नभए पार्टीको बैठक बसेर निर्णय लिनेछौँ ।’
‘संविधान संशोधन भन्न वित्तिकै हुने कुरा होइन, यसमा समय लाग्छ । तर प्रकृया शुरु गर्नुपर्छ,’ उनले थप भनेका थिए । उनको यो भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ कि समाजवादी पार्टी सरकारबाट तत्कालै बाहिरिने कुनै पनि मनस्थितिमा छैन ।
पहिलो संविधानसभा चुनावमा देशको चौथो ठूलो दलको रुपमा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल आएपछि उपेन्द्र यादव तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा २०६५ साल जेष्ठ १९ गते परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कट्वालकाण्ड भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यतिबेला उनी नौ महिनासम्म परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा काम गरेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको २० दिनपछि अर्थात २०६६ जेष्ठ ९ गते तत्कालिन एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
यादव आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान अध्यक्ष प्रचण्डसँग बार्गेनिङ्ग गरिरहेका थिए । उता, जेपी गुप्ता पनि आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सहभागी होस् भन्ने चाहनामा थिए । यादवको बार्गेनिङ्ग चलिरहेको बेला जेपी गुप्ताले फोरम नेपाल विभाजन गरे । पार्टी विभाजन गर्ने बित्तिकै डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्रिय भए । र, त्यो सरकारमा पनि सहभागी भए । भनिन्छ, त्यतिबेला झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मुख्य योजनाकारमध्येका एक थिए, जेपी गुप्ता ।
अन्त्यमा माओवादीले तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समर्थन गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । खनाल नेतृत्वको सरकारमा चार बुँदे सम्झौता गरेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल पनि सहभागी बन्यो ।
खनाल नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधान तथा पराराष्ट्र मन्त्री भएका थिए । तर, खनालको सरकार धेरै लामो समयसम्म चल्न सकेन । भारतको चलखेल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको रणनीतिका कारण ६ महिना नपुग्दै सरकार ढल्यो र तत्कालिन माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने ।
यसपटक पनि यादव आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान अध्यक्ष प्रचण्डसँग बार्गेनिङ्ग गरिरहेका थिए । उता, जेपी गुप्ता पनि आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सहभागी होस् भन्ने चाहनामा थिए । यादवको बार्गेनिङ्ग चलिरहेको बेला जेपी गुप्ताले फोरम नेपाल विभाजन गरे । पार्टी विभाजन गर्ने बित्तिकै डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्रिय भए । र, त्यो सरकारमा पनि सहभागी भए । भनिन्छ, त्यतिबेला झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मुख्य योजनाकारमध्येका एक थिए, जेपी गुप्ता ।
उपेन्द्र यादवकै सत्तामोहका कारण फोरम नेपाल दुई पटक विभाजित हुनपुग्यो । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा उपेन्द्र यादवको पार्टीले त्यति राम्रो उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेन अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेन । उनको पार्टी प्रत्यक्षमा दुई र समानुपातिकमा आठवटा सीटमा सिमित बन्यो ।
चुनावपछि तत्कालिन एमाले र काँग्रेसले मिलेर सरकार बनायो । तत्कालिन माओवादीसँग आन्दोलनमा रहेको कारणले तत्कालिन सत्ता गठबन्धनले यादवको पार्टीलाई सरकारमा आउने निम्तो गरेन । उनको दल माओवादीसँग मिलेर संविधान निर्माणमा आधिकारको सुनिश्चिता माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । पछि माओवादीले आन्दोलन छाडेर तत्कालिन एमाले र काँग्रेससँग मिलेर १६ बुँदे सम्झौता गरी संविधान संशोधनको प्रकृयालाई अगाडि बढ्यो ।
यता, यादव तराई–मधेशमा सिमित रहेको आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रियरुप दिने अभियानमा लागे । पार्टीमा आदिवासी जनजातिहरुलाई जोड्ने अभियान अन्तरगत अशोक राइको पार्टीसँग एकीकरण गरे । आदिवासी जनजातिहरुको पार्टी मिलाएर ३३ दलीय गठबन्धन बनाएर आन्दोलन पनि गरे । उनीहरुको विरोधका वावजुद संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भयो ।
सविधान निर्माण भएपछि यादव संविधान पुनर्लेखनको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए । संविधान नफेरिएसम्म चुनाव हुन नदिने, भइहाले पनि भाग नलिने उद्घोषसमेत गरेका थिए । २०७३ फागुन १२ गते तत्कालिन नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका अध्यक्ष डा.भट्टराई र अध्यक्ष यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचनको मिति घोषणाप्रति असहमति जनाएका थिए । संविधानमा देखिएको त्रुटिलाई सच्याउन माग गरेका थिए ।
जेठ १६ गते बसेको फोरम नेपाल संसदीय दलको बैठकले मन्त्री चयन गर्ने जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवलाई दियो । उपेन्द्र यादवले जिम्मेवारी पाएपछि जेठ १७ गते पदाधिकारीको बैठक बोलाए । स्वास्थ्यमन्त्रीमा राजेन्द्र श्रेष्ठ र शहरी विकास मन्त्रीमा उपेन्द्र यादव स्वयम् जाने चर्चा चल्यो । तर, यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुटुक्क भेटेर स्वास्थ्य मन्त्रीमा आफ्नो र शहरी विकास मन्त्रीमा इस्तियाक राइनको नाम बुझाए । र, २०७५ जेठ २१ गते मन्त्री पदमा सपथ लिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्मा यादवले परराष्ट्रमन्त्रीमा दावी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारी चलिरहेका बेला सो मन्त्रालय तत्काल हेरफेर नगर्ने भनेपछि उपेन्द्र स्वास्थ्यका लागि राजी भएका थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेकै बेला पदबाट बर्खास्त बने । समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको शहरी विकास मन्त्रालयमा नेकपाले आफ्नो राज्यमन्त्री पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई पार्टीका धेरै नेता कार्यकार्ताले अपमानको रुपमा अर्थ्याए । मन्त्रालय हेरफेर र राज्यमन्त्री हटाएपछि सरकारमा बस्नु हुँदैन भनेर पार्टीमा अवाज उठ्न थाल्यो । विशेष डा.बाबुराम भट्टराई समूहले सरकार छाड्न उपेन्द्र यादवलाई दबाब दिएका थिए । तर, यादवले विभिन्न बहाना बनाएर सत्तारोहणलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
वरिष्ठ पत्रकार सीतराम अग्रहरी भन्छन्, ‘सत्तामा रहनु नरहनु त्यो परस्थितिले निर्माण गर्ने कुरा हो तर जहाँ रहँदा आत्मसम्मानका साथ रहनुपर्छ तर सरकारमा समाजवादी पार्टीका आत्मसम्मान देखिएन ।’ समाजवादी पार्टीसँग कुनै छलफल नगर्नु, राज्यमन्त्री स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पतालको शैय्यामा रहेको बेला हटाइदिनु, योभन्दा ठूलो अपमानका के हुनसक्छ ?’ उनले उपेन्द्र यादवको ‘इमेज’ धुमिल हुँदै गएको टिप्पणी गरे ।